ONE: HERO'S DREAM
အဖွင့်စာမျက်နှာ | အားကစား | ONE: HERO'S DREAM
လာမည့် နိုဝင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့ သုဝဏ္ဏမိုးလုံလေလုံ အားကစားခန်းမကြီးတွင် မြန်မာတို့ရဲ့ အချစ်တော် ONE ချံပီယံရှစ် မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ချံပီယံ အောင်လအန်ဆန်း က သူ့ထက် ဝိတ်တန်းမြင့်၊ ကိုလုံးကိုယ်ထည် ကြီးမားတဲ့ အေလီယန် နဂလာနီ ဆိုတဲ့ ဟံဗီးဝိတ်တန်း ကစ်ဘောက်ဆင် ချန်ပီယံဟောင်းကို ရဲရင့်စွာ စိန်ခေါ်ထိုးသတ်မယ့် ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်လို့ “သူရဲကောင်းတစ်ဦးရဲ့ အိမ်မက်” လို့ တင်စားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲစဉ်အတွက် ပွဲကြည့်လက်မှတ် (Hero’s Dream Ticket)အပြင် အမှတ်တရ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးမရွေး ဝတ်ဆင်နိုင်သော ONE ချံပီယံရှစ်ရဲ့ တီရှပ်အစစ်အမှန်များကိုပါ (Official ONE Merchandise) အဖြစ် သီးခြားစီ ရောင်းချပေးနေပါပြီ။
Official ONE Merchandise
ONE Championship တီရှပ်နှင့် လက်ပတ် (တွဲလျက်)တစ်စုံကို ၃၀,၀၀၀/ကျပ်ဖြင့် ရောင်ချပေးလျှက်ရှိပြီး နှစ်သက်ရာ အင်္ကျီဆိုက်ကို ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တီရှပ်နှင့်လက်ပတ်(တွဲလျက်) ကို ကြိုတင်ရောင်းချထားခြင်းဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းထုတ်ယူရန် လက်မှတ်တစ်စောင် ထုတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် (အဆိုပါလက်မှတ်သည် ပွဲကြည့်ရန်လက်မှတ် မဟုတ်ပါ)။
ပွဲကျင်းပမည့် နိုဝင်ဘာလ(၃) ရက်နေ့တွင် သုဝဏ္ဏမိုးလုံလေလုံ အားကစားခန်းမ၌ ဖွင့်လှစ်ထားသော တီရှပ်နှင့်လက်ပတ် ထုတ်ယူရန် ကောင်တာတွင် အဆိုပါလက်မှတ် ပြ၍ ပစ္စည်းထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ အဆိုပါလက်မှတ်သည် ပစ္စည်းထုတ်ယူရန်သာဖြစ်ပြီး လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးပါက ပစ္စည်းထုတ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။
Hero’s Dream Ticket Price
လက်မှတ်ဈေးနှုန်းများအဖြစ် ၂၀၀,၀၀၀/ ၊ ၅၀,၀၀၀/ ၊ ၂၅,၀၀၀/ ၊ ၁၀,၀၀၀/ ကျပ်အဖြစ် အမျိုးအစား (၄)မျိုး ဝယ်ယူနိုင်ပြီး လက်မှတ်အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတာကြောင့် စိတ်ချရအောင် ကြိုတင်ဝယ်ယူထားဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ပွဲလက်မှတ်နှင့် အမှတ်တရတီရှပ် လက်မှတ်များကို ဖော်ပြပါနေရာများတွင် စက်တင်ဘာ (၂၆) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြပါပြီ။
4TV Show Room များ
4TV Show Room (ကျောက်တံတား) ဖုန်း - ၀၁ ၃၇၆ ၆၃၉
4TV Show Room (ဟံသာဝတီ) ဖုန်း - ၀၉ ၇၇၅ ၃၂၉ ၄၁၃
4TV Show Room (တာမွေ Ocean)
My AsiaTicket Office
အခန်း (၇၀၃)၊ အေးရိပ်သာ (၁)လမ်း၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ရွှေသံလွင်ကွန်ဒို၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ ဖုန်း - ၀၁ ၅၄ ၉၂ ၉၇ ၊ ၀၁ ၅၅ ၆၈ ၁၇
25 September 2017 , 09A.M. onward.
200,000/ 50,000/ 25,000/ 10,000 Kyats
Period: 25 Sept - 8 Oct, 23:59
Tags: ONE: HERO'S DREAM